दशैं नजिकियाे, हलमा फिल्म कहिले ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०४, २०७८ समय: १५:१३:४४
काठमाडौं / सरकारले फिल्म हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हलमा कुनै फिल्म प्रदर्शन हुनसकेको छैन । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण दोस्रो पटक १६ वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञा भदौ दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा धेरै हदसम्म खुला भइसकेको थियो । तर, कुनै निर्माता पनि फिल्म प्रदर्शन गर्न तम्सिएनन् ।
पहिलो पटक ११ चैत ०७६ जारी लकडाउन ०७७ को भदौमा अन्य क्षेत्र खुकुलो गरिएको भए पनि सरकारले फिल्म हल सञ्चालनको अनुमति भने दिएको थिएन । त्यतिबेला भने फिल्मकर्मी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले हल खोल्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । हल सञ्चालन अनुमति दिन सरकारले आलटाल गरिरहेको बेलामा अभिनेता शिव श्रेष्ठले आफूले निर्माण गरेको फिल्म ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ १ माघदेखि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । सरकारले हल खोल्न नदिए पनि आफूहरूले एकतर्फी रूपमा भए पनि हल खोलेर ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ चलाउने घोषणा हल सञ्चालकले गरे ।
अन्ततः सरकारले पुस अन्तिममा ५० प्रतिशत दर्शक राखेर हल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । कतिपयले सरकारको सो निर्णयको स्वागतसमेत गरे । अन्ततः १ माघ ०७७ मा ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ प्रदर्शन गरियो । तर, हलमा दर्शकको उपस्थिति भने निकै न्यून हुन पुग्यो । १ माघपछिका सातामा ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ पछि तत्कालै अरु नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएनन् । केही अंग्रेजी र हिन्दी फिल्म भने प्रदर्शन भए ।
२१ फागुनमा अर्काे नेपाली फिल्म हलमा प्रदर्शन भयो । फिल्म थियो–‘गोर्खे’ । सो फिल्मले पनि हलमा दर्शक तान्न सकेन । ‘गोर्खे’ को व्यावसायिकता ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ भन्दा पनि नाजुक हुन पुग्यो । नयाँ वर्ष र दशै, तिहारमा नेपाली फिल्म प्रदर्शनका लागि निकै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । ती ‘डेट’ मा ठूलो ब्यानरका मानिने फिल्महरू पनि जुध्ने गरेका छन् । तर, अपशोच, हल खुले पनि ०७८ को नयाँ वर्ष खान ती ठूला भनी÷मानिएका ब्यानरका कुनै फिल्म पनि प्रदर्शनमा आएनन् ।
बरु, निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहराले लकडाउनकै विषयमा निर्माण गरेको ‘श्री’ र राजबहादुर सानेले ०७१ मा निर्देशन गरेको, तर हलमा आउन नपाएको ‘गुड फ्रेन्ड’ नामक फिल्म २७ चैतमा प्रदर्शनमा आए । ‘श्री’ ले दर्शकको राम्रै प्रतिक्रिया पायो । तर, ‘गुड फ्रेन्ड’ भने कतिपय हलमा एक शोमै उत्रियो । यद्यपि, नयाँ वर्ष ०७८ को अवसर पारेर २७ चैतमा दीपक ओली निर्देशित ‘कृष्ण–लीला’, मुकुन्द भट्ट निर्देशित ‘लप्पन छप्पन–२’ र कैलाश राई निर्देशित ‘मनसँग मन’ प्रदर्शनमा आउने घोषणा गरिएको थियो । ती फिल्मले गीत तथा टिजर र प्रोमोसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, तीनवटै फिल्म प्रदर्शन गरिएन ।
‘एकातिर हलमा ५० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्नुपर्ने रे, अर्काेतिर कोरोनाको संक्रमण झन् बढ्दै गयो । फेरि लकडाउन हुन सक्ने संकेत पाएपछि रिलिजको एक साताअघि मात्रै स्थगित गरेका हौ,’ ‘कृष्ण–लीला’का कार्यकारी निर्माता रतन श्रेष्ठले न्युज कारखानासँग भने, ‘हामी त फिल्म प्रदर्शन गर्न तयार नै थियौ । तर, कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएकाले अन्तिम समयमा ‘ब्याक’ हुनुपरेको हो ।’
‘कृष्ण–लीला’, ‘मनसँग मन’ र ‘लप्पन छप्पन–२’ २७ चैतमा नआउने भएपछि हतार हतार सो मितिमा ‘श्री’ र ‘गुडफ्रेन्ड’ प्रदर्शन गरिएको थियो । ‘खासमा ‘श्री’ हलमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएकै होइन,’ निर्देशक बोहरा भन्छन्, ‘तर पनि अरु फिल्म नआउने भएकाले हतार हतारमा प्रदर्शन गरिएको थियो । दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रियाले मलाई यस्तै प्रयोगात्मक फिल्म बनाउने प्रेरणा मिलेको छ ।’
करिब ७२ घन्टामा सुटिङ सकाइएको ‘श्री’ तेस्रो सातामा प्रदर्शन हुँदै गर्दा १६ वैशाखदेखि सरकारले दोस्रो चरणको लकडाउन जारी गर्यो । ‘श्री’ राम्रै चल्दैथियो, लकडाउने रोकियो,’ ‘श्री’ का वितरक करण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो फिल्म अहिले फेरि प्रदर्शन गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, हल नखुलेकाले त्यत्तिकै भयो ।’ पहिलो लकडाउन खुलेपछि फिल्म निर्माता तथा हल सञ्चालकहरू फिल्म प्रदर्शन गर्न आतुर भएका थिए । उनीहरूले अन्य झै फिल्म क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । लकडाउन खुकुलो हुनेवित्तिकै करिब एक दर्जन फिल्म छायांकन पनि भए । तर, जब दोस्रो पटक लकडाउन भयो र गत भदौ मध्यमा हल खोल्ने अनुमति पनि मिल्यो, तर अहिले फिल्म प्रदर्शन तथा निर्माण गर्न निर्माता, हल सञ्चालक तातेका छैनन् ।
‘जबसम्म सरकारले हलमा पूर्णरूपमा दर्शक राख्न दिने व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म फिल्म रिलिज गरेर अर्थै छैन,’ वितरक सुनील मानन्धरले न्युज कारखानासँग भने, ‘स्थिति सामान्य भयो भने पनि फिल्म चल्ने माहोल बन्न एक डेढ वर्ष नै लाग्न सक्छ ।’
कसले गर्ला फिल्म रिलिज ?
कोरोनाअघि विशेष गरी नयाँ वर्ष, दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति र शिवरात्रीको छेकोमा आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गर्न निर्माताहरू लालायित हुन्थे । एकै साता चारवटासम्म नयाँ नेपाली फिल्म भिड्ने गर्दथे । तर, कोरोनाका कारण अहिले स्थिति निकै फरक छ । अहिले ५० प्रतिशत दर्शक राखेर हल चलाउन पाउने अनुमति पाए पनि यो दशैं तथा तिहारमा समेत ठूलो ब्यानर तथा लगानीका मानिने कुनै फिल्म पनि प्रदर्शनमा नआउने भएका छन् ।
‘एक त सरकारले अझैसम्म पनि उपत्यकाबाहिर हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन । त्यसमाथि उपत्यकामा पनि ५० प्रतिशत दर्शक राखेर चलाउनुपर्ने रे, यस्तोमा करोडौ लगानीका फिल्म प्रदर्शन गर्ने मूर्खता कसले गर्छ ?,’ निर्माता सन्तोष सेनको भनाइ छ, ‘राज्यबाट न कुनै सहुलियत, सुविधा छ, न कुनै नीति नै । यस्तोमा रिस्क लिन सकिन्नँ ।’
वितरक तथा निर्माता रोहित कट्टेल चलचित्र विकास बोर्ड र हल सञ्चालकले निश्चित रकमको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने आफू आफ्नो फिल्म ‘कृष्ण–लीला’ प्रदर्शन गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘यसबारेमा दोस्रो लकडाउनभन्दा अघि नै मैले हल सञ्चालक तथा बोर्डसँग छलफल गरेको थिएँ । तर कतैबाट पनि सकारात्मक कुरा आएन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा फिल्म रिलिज गर्न गाह्रो छ ।’
दशैंमा ‘धन्दागिरी’ र ‘डाँडाको वरपीपल’
वितरक कट्टेलले यो दशैमा आफ्नो कम्पनी आरआर फिल्मले ‘धन्दागिरी’ नामक फिल्म प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘दशैंमा अरु बेलामा बढी भिडभाड हुन्छ । हलमा मान्छे जान सक्छन्, त्यसकारण २५ असोजमा ‘धन्दागिरी’ लगाउँदै छौ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो ठूलो आशा नराखी, फिल्म चल्ने माहोल बनोस् भनेर रिलिज गर्न लागेका हौं ।’
त्यसो त दशैंमै शोभित बस्नेत निर्देशित नयाँ फिल्म ‘डाँडाको वरपीपल’ पनि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ । बुढासुब्बा डिजिटलले निर्माण गरेको यो फिल्म खासमा बुढासुब्बाकै युट्युब च्यानल तथा बिएम एचडी टिभीका लागि निर्माण गरिएको हो । ओटिटी प्लेटफर्म र टिभीमा मात्र प्रदर्शन गर्न निर्माण गरिएको भए पनि अब भने यो फिल्म दशैंको अवसरमा २६ असोजमा खुलेका हलमा समेत प्रदर्शन गरिने छ ।
‘डाँडाको वरपीपल’ काठमाडौ र मोफसलका सबै हलमा प्रदर्शन हुन्छ,’ निर्देशक बस्नेत भन्छन्, ‘दशंैअगाडि मोफसलका हल पनि सञ्चालनमा आउने भएकाले सबैतिर फिल्म चलाउने सम्झौता भएको छ ।’
त्यसो त निर्देशक बस्नेतले गत वर्षको दशैंअघि पनि बुढा सुब्बा डिजिटलकै लगानीमा ‘लक्ष्मीपूजा’ नामक फिल्म निर्देशन गरेका थिए । त्यतिबेला पनि हल खुलेमा हलमा समेत लगाउने तयारी थियो । तर, हल खुलेन । ‘लक्ष्मीपूजा’ टिभी र ओटिटीमार्फत दर्शकमाझ पुग्यो ।
प्रदर्शन मिति तोक्ने सकस
कोरोनाअघि, छक्का पन्जा–४, अशोक शर्माको अल्लारे–२, रेनेशा वान्तवा राईको आइएम २१, झरना थापाको ए मेरो हजुर–४, छविराज ओझाको नयाँ फिल्मलगायतले ०७७ को दशैमा प्रदर्शन हुने घोषणा गरेका थिए । तर कोरोनाका कारण सबै बन्द भयो । अब भने जनजीवन सामान्य हुँदै जाँदा ठूला भनिने फिल्मले प्रदर्शन मिति तोक्दै गइरहेका छन् ।
पहिला, अघिल्लो वर्षको २७ चैतमा प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको ‘लप्पन छप्पन–२’ ले अगामी १३ फागुन अर्थात् शिवरात्रीको छेकोमा प्रदर्शन हुने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, झरना थापाको ए मेरो हजुर–४ ले केही दिनअघि मात्रै प्रदर्शन मिति घोषणा गर्यो ।
अनमोल केसी र सुहाना थापा मुख्य भूमिकामा रहेको सो फिल्म नयाँ वर्ष ०७९ को अवसरमा २८ चैतमा प्रदर्शन हुनेछ । अन्य फिल्महरूले प्रदर्शन मिति तय गर्न क्यालेन्डर पल्टाइरहेको भए तापनि स्थिति कस्तो होला भन्ने त्रासले मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् ।